Kooxda Liverpool oo xiriir la sameysay Adrien Rabiot | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Kooxda Liverpool oo xiriir la sameysay Adrien Rabiot
Kooxda Liverpool oo xiriir la sameysay Adrien Rabiot
Posted by: Ahmed Haadi December 8, 2018
Himilo FM – Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay dalab u dirtay ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Paris Saint-Germain xiddiga lagu magacaabo Adrien Rabiot.
Xiddiga heerka caalami ee dalka Faransiiska ayaa la fahamsan yahay inuu diiday dalab qandaraas kordhin ah oo uga yimid PSG, taasi oo la micno ah in keliya lix billood ay uga harsan tahay qandaraaskiisa haatan ee kooxda.
Kooxda Liverpool ayaa billowgii xilli ciyaaredkaan la saxiixatay xiddigaha khadka dhexe ee Fabinho iyo Naby Keita.
Liverpool ayaa ka mid ah kooxo dhowr ah oo la sheegay in ay xiiseynayaan Rabiot oo lix bil kaddib isu bedeli doona mid xor ah. Majaladda L’Equipe ayaa warineysa in labada kooxood ee Barcelona iyo Liverpool ay xiriir wanaagsan la sameeyeen 23 jirkaan.
Xiddiga reer France ayaa PSG ka qaata qiimo lacageed oo gaarsiisan 55 kun ginni isbuucii,wuxuuna rajeynayaa in qiimaha loo siyaadiyo.
Rabiot ayaa xor u ah in uu la hadlo kooxaha uu doonayo billowga bisha soo socota ee Janaayo,laacibkaan ayaa kusoo billowday 15 kulan oo horyaalka Ligue 1 iyo tartanka Champions League xilli ciyaareedkan.
Previous: AC Milan oo dooneysa laba ciyaarayahan oo kamid ah kooxda Liverpool
Next: Sawirro: Kabaha 17-ka milyan ku fadhiya ee ugu qaalisan caalamka